A Visit to Bumrungrad Hospital
7th Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးအား Medical Partner အဖြစ် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဆေးရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်သော Bumrungrad Hospital မှ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ထပ်မံ ပံ့ပိုးကူညီပေးထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ Bumrungrad Hospital မှ Miss Universe
A Visit to Forever Gems by Shwe Nan Daw
၇ ကြိမ်မြောက် မယ်စင်္ကြဝဠာမြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးတွင် အနိုင်ရရှိမယ့် နောက်ဆုံးဆန်ခါတင်အလှမယ် ၅ ဦးအတွက် လှပခမ်းနားတဲ့ သရဖူများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရွှေနန်းတော်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင
A Visit to GAC Motor Myanmar
Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်များသည် (၇) ကြိမ်မြောက် Miss Universe Myanmar ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် Official Mobile Partner အဖြစ် ပံ့ပိုးကူညီပေးထားသည့် GAC Motor Showroom သို့သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ခဲ့ကြပါ
MUM 2019 - Thank you for Activities Trip
Miss Universe Myanmar 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်များ၏ လူမှုရေးခရီးစဉ်အဖြစ် ထားဝယ်၊ ကော့သောင်း၊ ရနောင်း၊ မြိတ်မြို့များသို့သွားရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း ထားဝယ်မြို့ မောင်းမကန်ကမ်းခြေတွင် ညအိပ်ရပ်နားပြီး ထားဝယ်မြို့ပေါ်တွင်
Activities in Kawthoung-Ranong Trip
Miss Universe Myanmar 2019 အလှမယ်လေးများသည် ကော့သောင်း - ရနောင်း ခရီးစဉ်တွင် လှုပ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
MUM 2019 Donation to Salon Village (Myeik)
Miss Universe Myanmar Organization နှင့် Miss Universe Myanmar 2019 အလှမယ်များမှ မြိတ်မြို့ အနီးရှိ ပရောဝ (ဆလုံကျေးရွာ) သို့ မုန့်နှင့် ကလေးကစားစရာပစ္စည်းများအား သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီး ရွာသူရွာသားများမှ ရိုးရာတေးသီချင်းများဖြင့် ပြန်လည်ဖျော်ပြခဲ့ကြသည်။
A visite to Myeik and Salon
မယ်စကြာင်္ဝဠာ ၂၀၁၉ အလှမယ်လေးများသည် မြိတ်မြို့ ကျွန်းဘုရင်လေးကျွန်းပင်လယ်ပြင် အပန်းဖြေစခန်းနှင့် ပရောဝ (Sea Gypsy) ဆလုံကျေးရွာသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်းနှင့် လှူဒါန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
Activities at Nyaung Oo Phee Island and Victoria Cliff Hotel
မယ်စကြာင်္ဝဠာ ၂၀၁၉ အလှမယ်လေးများသည် ညောင်ဦးဖီးကျွန်းတွင် လှေလှော်ခြင်း နှင့် ရေကူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက် Victoria Cliff Hotel တွင် Spa ပြုလုပ်ခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်းများဖြင့် အပန်းဖြေအနားယူခဲ့ကြပါသည်။
Activities and Hotel Services Of Grand Andaman Hotel & Resort
Talent Competition And Swimsuit Presentation Hosted By Grand Andaman Hotel & Resort.
MUM 2019 - Swimsuit Presentation (2)
Who will be Miss Best Swimsuit By Bsc Streamline?
Photo By Studio D Invictus
Host By Grand Andaman Hotel And Resort
MUM 2019 - Swimsuit Presentation
၁၃-၅-၂၀၁၉ နေ့ ညနေ(၄:၀၀)နာရီတွင် မယ်စကြာင်္ဝဠာ ၂၀၁၉ အလှမယ်လေးများ၏ Swimsuit Presentation ပွဲကိုသူဌေးကျွန်းပေါ်ရှိ Grand Andaman Hotel ၏ Poolside တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
MUM 2019 - National Gifts Auction Ceremony
မယ်စကြာင်္ဝဠာ ၂၀၁၉ အလှမယ်လေးများ၏ National Gifts Auction ပွဲကို Tha Htay Kyun Hotel and Resort တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်လေးတွေရဲ့အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို လေလံအောင်မြင်သည်အထိ ဝယ်ယူအားပေးကြသူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
MUM 2019 - National Gifts Auction
မယ်စကြာင်္ဝဠာ ၂၀၁၉ အလှမယ်လေးများ၏ National Gifts Auction ပွဲကို Tha Htay Kyun Hotel and Resort တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်အသီးသီး၏ လေလံပစ္စည်းများမှာ ရိုးရာထည်များဖြစ်သောကြောင့် ပရိတ်သတ်များ စိတ်ဝင်စားစွာ လေလံပွဲတွင် ပါဝင်ကြပါသည်။
မယ်စကြာင်္ဝဠာ ၂၀၁၉ အလှမယ်လေးများသည် Grand Andaman Hotel တွင် Adventure များကို ရင်ခုန်ပျော်ရွှင်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Photo - Phyo Min Zaw ( Paparazzi - Studio D Invictus)
၁၂-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့ ည (၇:၀၀) အချိန်တွင် Grand Andaman Hotel, Andaman Grand Balloon ၌ မယ်စကြာဝဠာမြန်မာ ၂၀၁၉ အလှမယ်များ၏ Talent Show ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် Winner အဖြစ် Yangon (West) ကိုယ်စားပြု အလှမယ် No Noe K မှလည်းကောင်း၊ 1st Runner Up ဆုကို Myawaddy ကိုယ်စားပြု အ
A visit to Nyaung Oo Phee Island
မယ်စကြာင်္ဝဠာ ၂၀၁၉ အလှမယ်လေးတွေ သူဌေးကျွန်းမှာရှိတဲ့ Grand Andaman Hotel ကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြတော့မှာဖြစ်လို့ ဒီနေ့မှာတော့ ညောင်ဦးဖီးကျွန်းကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
At the Maungmakan Beach (Dawei)
ထားဝယ်မြို့ မောင်းမကန် ကမ်းခြေတွင် လွတ်လပ်ပေ့ါပါးစွာ လှပနေကြသော အလှမယ်လေးများ၏ ပုံရိပ်လေးများအား ချစ်စဖွယ်မြင်တွေ့ရပါသည်။
Official Photographer - Phyo Min Zaw - Paparazzi (Studio D Invictus)